पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धनका लागि पदयात्रा
कोभिड–१९ को प्रभावका कारण रोकिएका पर्यटन गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न पदयात्राको आयोजना गरिएको समितिका अध्यक्ष शिवकुमार आलेले जानकारी दिए । आगामी कात्तिक १ गतेदेखि गरिने पदयात्रा भिमाद बजारदेखि वडा–९ को पाथर्दी पुगेर टुंगिनेछ ।
पदयात्रामा करिब १५० जनाको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको आलेले जानकारी दिए । ‘कोभिडले पर्यटनका सबै गतिविधि रोकिए, अब विस्तारै पर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यस्वरूप वडामा भएका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारका लागि पदयात्रा गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘पदयात्राको मुख्य लक्ष्य वडाभित्र भएका सबै पर्यटकीय गन्तव्य बाहिर ल्याउनु हो ।’ पदयात्रा १७ किलोमिटर दूरीको रहनेछ ।
पदयात्राका क्रममा सोही वडामा रहेको सिद्धगुफाको पनि भ्रमण गरिनेछ । एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा सूचीकृत गुफामा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । कोभिड–१९ कै समयमा गुफा क्षेत्रमा शौचालय, प्रतीक्षालय र रेलिङ निर्माण गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रू. २५ लाख उपलब्ध गराएको थियो ।
पदयात्राको क्रममा इलुङ झरना पुग्ने कार्यक्रम पनि छ । व्यावसायिक क्यानोनिङको तयारीमा रहेको इलुङ झरनामा कोभिड–१९ कै कारण उक्त क्यानोनिङ रोकिएको छ ।
इलुङ झरना जाने बाटोमा अप्ठ्यारो रहेको ठाउँमा ढुंगाले छापेर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ भने सोही ठाउँमा रेलिङसमेत हालिएको छ । झरनामा पूर्वाधार विकासका लागि नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रू. १० लाख विनियोजन गरेको छ । सो रकमबाट क्यानोनिङका लागि आवश्यक सामग्री खरीद गर्ने तयारी गरिएको छ । पदयात्रामा पुग्ने पदयात्रीलाई सोही ठाउँमा रहेको पाथर्दी सामुदायिक घरबासमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पाथर्दी गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री नमूना वातावरणमैत्री कृषि गाउँ हो ।
भीमाद नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष इमान थापाले पदयात्राले समग्र वडाको पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको जानकारी दिए । ‘पदयात्रामार्फत पर्यटकीय गन्तव्य चिनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । रासस